कस्ता व्यक्तिले मिल्दैन कोरोनाविरुद्ध खोप लगाउन ? – Sodhpatra
कस्ता व्यक्तिले मिल्दैन कोरोनाविरुद्ध खोप लगाउन ?
खोप कस्तो व्यक्तिले लगाउने र कस्तो व्यक्तिले लगाउन नमिल्ने ?
प्रकाशित : ३१ असार २०७८, बिहीबार १०:५१ July 15, 2021
काठमाडौँ : देशभर कोरोना संक्रमणविरुद्ध खोप अभियान जारी छ । खोप कस्तो व्यक्तिले लगाउने र कस्तो व्यक्तिले लगाउन नमिल्ने ? आमसर्वसाधारणमा अन्योलता छाएको छ । केही खोप केन्द्रहरूले उमेर मात्रै सोधेर खोप उपलब्ध गराउने गरेको समेत पाइएको छ । केही खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाएका सर्वसाधारणको विस्तृत विवरण नराखिएको देखिएको छ ।